अमेजन खोजशब्द रैंक ट्रयाकरको फाइदाहरू के हुन्?
धेरै अनलाइन व्यापारीहरूले बिक्री र गुमाउने उच्च रैंकिङ प्रतियोगीको कारण गुमाउँछन्। यो सजिलो हुन सकेन यो स्थिति कम्तिमा तपाईं आफ्नो कुञ्जीपाटीको स्थितिहरू ट्रयाक गरिरहनु भएको छैन। निस्सन्देह यस्ता अनुसन्धानहरू म्यानुअल रूपमा जटिल हुन र समय लगाउन सकिन्छ। सौभाग्य देखि, त्यहाँ विभिन्न अमेजन खोजशब्द श्रेणी श्रेणी ट्रयाकर उपकरण वेबमा उपलब्ध छन्।
यस लेखमा हामी केही आधारभूत कठिनाइहरूमा कसरी गर्ने भन्ने छलफल गर्नेछौं। अमेजन व्यापारीहरूले सामान्यतया उनीहरूको अभ्यासमा सामना गर्छन् र तपाईंसँग केही चालहरू र अनिवार्य हरू कसरी आफ्नो उत्पादनको बिक्री बढाउन सक्नुहुन्छ।
आउनुहोस् पहिल्यै छलफल गर्नुहोस् कि Amazon A9 एल्गोरिदम कसरी काम गर्छ। यो एल्गोरिदमको तन्त्रणा बुझ्न हामीलाई विजयी अमेजन अनुकूलन अभियान निर्माण गर्न र उत्पादनको स्तर बढाउन मद्दत गर्नेछ।
अमेजन खोज काम कसरी गर्छ?
अमेजन ए3एल्गोरिदम धेरै प्रसिद्ध Google रैंकिंग एल्गोरिदम को समान छ। यद्यपि, त्यहाँ केही फरक छन्। Google वेब पेजहरूमा फोकस हुँदा, अमेजनले उत्पादनहरूमा उच्चारण गर्दछ। सांख्यिकीय डेटाको अनुसार, जब यो उत्पादन अनुसन्धानको लागी आउँदछ, प्रयोगकर्ताले Google खोजको तुलनामा अमेजन खोजीलाई संकेत गर्दछ। यो उपलब्ध उत्पादन सूची र उत्पादनहरु बारे पूर्ण जानकारी द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, यहाँ तपाईं मूल्यहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले रोज्नु भएको उत्पादनको बारेमा समीक्षाहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूलाई Google खोजको रूपमा धेरै ब्राउज गर्न आवश्यक छैन। उत्पादनको बारेमा सबै जानकारी एक पृष्ठमा राखिएको छ। अमेजन खोजी नतिजाहरू प्रायः उपभोक्ताको आशयद्वारा संचालित हुन्छन् विशेष रुपले उत्पादित उत्पादनहरू खरीद गर्न।
अमेजनले उत्पादन उत्पादन निर्धारण गर्ने विशेषताहरूको संख्यामा लिन्छ:
उपभोक्ताहरूको बीचमा लोकप्रियता;
कुन उत्पादनहरू उच्चतम रूपान्तरण दर छन्;
कुन उत्पादनले सर्वश्रेष्ठ खरीदारी मूल्य प्रदान गर्दछ;
खोज क्वेरी को लागि प्रासंगिक उत्पादनहरु।
Amazon Amazon मा आफ्नो रैंक को अमेज़न खोजशब्द रैंक tracker?
Amazon रैंकिंग एल्गोरिदम मुख्य रूप देखि कीवर्ड मा आधारित छ। त्यसकारण, तपाईको लक्षित कीवर्ड प्रयोग गरी उचित तरिकामा तपाईले उच्च र उच्च लक्षित ट्राफिक उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।
मद्दतमा अमेजन किवर्ड टूल उपकरणले तपाईलाई लक्षित लक्षित शब्दहरू चयन गर्न र उनीहरूको स्थानहरू ट्र्याक गर्न सम्भव छ। प्राप्त डेटाले तपाईलाई सही खोजी सर्तहरू छान्नु र सही र रणनीतिक स्थानहरूमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक, अमेजन खोजशब्द रैंक ट्रयाकरले तपाईंलाई आफ्नो प्रतियोगिहरु को नजिक बनाउन र तपाईंको संभावित ग्राहकहरु लाई ब्रान्डमा आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईंको कुञ्जीपाटीहरू - म्यानुअल र स्वचालित ट्रयाक र ट्रयाक गर्न दुई सम्भावित तरिकाहरू छन्। यद्यपि मैन्युअल रूपले प्रत्येक खोज सर्तहरू मार्फत जान सक्छ र जाँच गर्न धेरै समय खर्च गर्दछ कि यो सान्दर्भिक छ वा छैन, यसको सट्टा अमेजन खोजशब्द श्रेणी ट्रयाकर प्रयोग गर्न सजिलो छ। यस पेशेवर स्वचालित उपकरणको साथ तपाईले आफ्नो समय बचत गर्नेछ र सबैभन्दा सान्दर्भिक र सही डेटा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अमेजन खोजशब्द रैंक ट्रयाकर प्रयोग गरेर तपाईका प्रतियोगी खोजशब्दहरु को ट्रैक कसरि गर्नुहोस?
यस उपकरणको प्रयोग गरेर तपाइँ सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईको लक्षित कीवर्ड कुन स्थानमा राम्रो छ र यो जहाँ पनि तपाइँका प्रतियोगिहरु पछि पछि लाग्नु हुन्छ। यो उपकरणले अमेजन SERP मा श्रेणीमा प्रयोग गर्ने प्रतियोगीहरू र यी शब्दहरू कसरी राम्ररी राम्ररी कत्तिको खोजी गर्ने कुन सर्त शर्तहरू निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंसँग तपाईंको अमेजन अनुकूलन अभियानको लागि सहि दृष्टिकोण छ भने, तपाइँ यी शब्दहरू उधार लिन र उनीहरूको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। फलस्वरूप, यसले तपाईंको सामग्री मार्केटिङ रणनीतिलाई धक्का दिनेछ।
. Source - zã¼gellift